Wazi njani ukuba umntwana uyonakaliswa | IBezzia
Ungamxelela njani ukuba umntwana wonakele
UMaria Jose Roldan | 12/03/2021 22:00 | Fundisa abantwana
Akukho mzali uthanda ukuvuma ukuba umntwana wakhe wonakele kwaye akafumani mfundo eyiyo. Nangona kunjalo, olu hlobo lokuziphatha luxhaphake kunokuba unokucinga kwaye kukukhanya kwemini.
Ke ngoko, kubalulekile ukuba ukwazi ukujongana nale ngxaki kwangethuba kuba kungenjalo banokulimala xa kufikwa ebudaleni. Abazali kufuneka babe nezixhobo eziyimfuneko ukuze bakwazi ukulungisa isimilo esiyingozi ebantwaneni kwaye bathintele abantwana babo ukuba bangonakali.
1 Ungamxelela njani ukuba umntwana wonakele
2 Ungayilungisa njani indlela yokuziphatha komntwana owonakeleyo
Kukho imiqondiso emininzi ebonisa ukuba umntwana uyonakala kwaye indlela yokuziphatha kwayo ayichanekanga:
Ukuze umntwana abe nomsindo ngayo yonke into kwaye abe nomsindo yinto eqhelekileyo kude kube yiminyaka emi-3 okanye emi-4 ubudala. Ukuba emva kwaloo minyaka, umntwana uyaqhubeka nokuba nomsindo, oko kunokubonisa ukuba ungumntwana owonakeleyo. Kwiminyaka enjalo, umsindo kunye nomsindo zisetyenziselwa ukukhohlisa abazali kwaye bafumane into abayifunayo.
Umntwana owonakeleyo akakuxabisi oko anako kwaye unento ayithandayo maxa onke. Akukho kwanto imzalisekisayo okanye eyonelisayo kwaye akakwazi ukuthatha impendulo.
Ukungabikho kwemfundo kunye neenqobo ezisemgangathweni yenye yeempawu ezicacileyo zokuba umntwana uyonakala. Uthetha nabanye ngendlela engenantlonipho kwaphela nangokudelela okupheleleyo.
Ukuba umntwana wonakele, kuyinto eqhelekileyo ukuba angathobeli naluphi na uhlobo lomyalelo kubazali. Akakwazi ukwamkela imigaqo esekwe ekhaya kwaye enze le nto ayifunayo.
Ungayilungisa njani indlela yokuziphatha komntwana owonakeleyo
Into yokuqala ekufuneka bayenzile abazali kukwamkela ukuba umntwana wabo wonakele kwaye imfundo efunyenweyo ayonelanga. Ukusuka apha kubalulekile ukulungisa isimilo esinjalo kwaye ulandele uthotho lwezikhokelo ezinceda umntwana ukuba aziphathe kakuhle:
Kubalulekile ukuma uqinile ujongene nemilinganiselo ebekiweyo kwaye unganikezeli emntwaneni.
Omncinci kufuneka abe noluhlu loxanduva ekufuneka luzalisekisiwe. Abazali abanakumnceda kwaye omncinci utyala umntu ukuba azalisekise.
Ingxoxo kunye nonxibelelwano olululo ngumba obonisa imbeko kubantu abadala. Ingxaki abanayo abantwana namhlanje kukuba kunqabile ukuba bathethe nabazali babo, ebangela isimilo esingafanelekanga.
Abazali kufuneka babe ngumzekelo kubantwana babo kwaye babe nokuziphatha okufanelekileyo phambi kwabo.
Kuhle ukuvuyisana nomntwana xa esenza into elungileyo kwaye intle. Ukomeleza isimilo esinjalo kuya kumnceda umntwana akwazi ukuhlonipha imigaqo eyahlukeneyo emiselwe ngabazali.
Ngamafutshane, Ukufundisa umntwana ayonto ilula okanye elula kwaye ifuna ixesha kunye nomonde omkhulu. Kuqala kunokuba nzima emntwaneni ukuqonda le mithetho kodwa uya kuphelela ekufundeni ngokuqinileyo uthotho lweenqobo eziza kumnceda ukuba indlela yakhe yokuziphatha ibe yeyona ifanelekileyo nefanelekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Oomama » Fundisa abantwana » Ungamxelela njani ukuba umntwana wonakele
Iincwadi ezi-5 ezingokuphila ngokuzinzileyo ekufuneka uzifundile
Oku kutya kuchaphazela ukujikeleza kwegazi lakho